रोचक राजनीति मोडमा काँग्रेस, देउवाले सुजतालाई मन्त्री बनाउने ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
रोचक राजनीति मोडमा काँग्रेस, देउवाले सुजतालाई मन्त्री बनाउने !
नेपाली काँग्रेसले आज सरकारमा जाने थप मन्त्रीहरुको टुंगो लगाउने भएको छ । मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरको आन्तरिक बैठक बस्दैछ । पौडेल पक्षले २ मन्त्रालय पाएको छ । २ मन्त्रालयमा क कस्लाई लानेबारे सहमति बन्न सकेको छैन ।
मन्त्रीका दाबेदार धेरै भएकाले पौडेल पक्षलाई चुनौती छ । मन्त्रीका दाबेदारमा उपप्रधानमन्त्री भइसकेकी सुजाता कोइराला, पूर्वमन्त्रीहरु डा. मीनेन्द्र रिजाल र राजन केसीका अलावा तेजुलाल चौधरी छन् ।
महामन्त्री डा. सशांक कोइराला सुजाता र मीनेन्द्रमध्ये एकलाई बनाउने पक्षमा छन् । सुजातालाई नबनाउँदा सशांकलाई आगामी महाधिवेशनमा समस्या पर्ने भएकाले पनि दबाब छ । काँग्रेसबाट कोही पनि महिला मन्त्री नबनाइएकाले सुजाताको सम्भावना बलियो बनेको छ । सुजाताको नाम पौडेल पक्षबाट सिफारिश नभए सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पक्षबाट लाने सम्भावना पनि छ । यसले काँग्रेस राजनीतिलाई रोचक मोडमा पुर्याउने निश्चितप्रायः छ ।
पछिल्लो समय जीपी फाउन्डेशनमार्फत् पार्टीभित्र पकड बलियो बनाएकी सुजाताले विद्रोह गर्न सक्ने भएकाले पौडेल सतर्क भएका छन् । महामन्त्री सशांक कोइराला पनि कोइराला परिवारभित्रको एकता बिग्रन नदिनका लागि सचेत भएको बुझिएको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार सुजाताले पौडेललाई गत महाधिवेशनमा पनि साथ दिएको भन्दै अब आफूलाई साथ दिन भनेकी छिन् । पौडेल भने तेजुलाल चौधरीलाई बनाउने पक्षमा छन् ।